Michael Owen oo ka aragti dhiibtay qalalaasaha ka dhex dhashay Saalax iyo Mane – Gool FM
Michael Owen oo ka aragti dhiibtay qalalaasaha ka dhex dhashay Saalax iyo Mane
Dajiye September 7, 2019
(England) 07 Sebt 2019. Halyeeyga kubadda cagta dalka England ee Michael Owen ayaa daaha ka qaaday aragtidiisa kaga aadan qalalaasaha ka dhex dhashay kooxda Liverpool kaddib kulankii ay kula ciyaareen horyaalka Premier League naadiga Burnley.
Xiddiga reer Senegal ee Sadio Mane ayaa si cad u muujiyay sida uu kaga xanaaqay kaddib markii la badalay inta lagu gudajiray kulankii Burnley, xaasid nimada Maxamed Saalax ee mararka qaar iyo inuusan kubaddaha u baasin saaxiibadiis kale marka ay ku sugan yihiin boosas fiican,
Laakiin Michael Owen ayaa sheegay in kalitalisnimada looga baahan yahay koox kasta ee weerar soo qaada iyadoo la raadinayo dhalinta goolal, wuxuuna xaqiijiyay in qalalaasahaasi goor dhaw lasoo afjari doono.
Michael Owen ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Waxaan u maleynayaa inay jirto dheellitirnaan badan ee dhanka weerarka kooxda Liverpool, laakiin arrimuhu maalintaas way sii kaceen”.
“Dhibaatooyinkaasi waxay dhacaan mar walba, shaqada Jürgen Klopp ayaa waxay tahay in arrimaha la fududeeyo”.
“Uma maleynayo in dhibaatada ay sii socon dooonto, marka xigta uu Mohamed Salah kubbadda helo, wuxuu u badan yahay inuu aad uga warqabo in mararka qaar ay tahay inuu baaso, haddi ay jirto fursad fiican”.
“Messi igama codsanin inaan la saxiixdo Neymar Jr” – Madaxweynaha kooxda Barcelona
Sanchez oo kalsooni ka muujiyay inay kaga guuleysan karaan Barcelona kulanka Champions League